Saldhiga Milatari ee dowlada Turkiga ka dhistay Muqdisho oo maanta xariga laga jarayo * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Saldhiga Milatari ee dowlada Turkiga ka dhistay Muqdisho oo maanta xariga laga jarayo
Waxaa maanta lagu wadaa in si rasmi ah xariga looga jaro Saldhiga Milatari ee dowlada Turkiga ka dhistay Magaalada Muqdisho, waxaana saldhigan loogu tala galay in lagu tababaro ciidanka Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Taliyaha Ciidamada Milateriga Turkiga Gen. Halusi Akar ayaa lagu wadaa in maanta si wadajir ah xariga uga jaraan saldhigan Milatari ee gacanta ku heyso dowlada Turkiga.
Saldhigan Milatari ee maanta xariga laga jarayo ayaa noqonaya Saldhiga ugu weyn ee Dowlada Turkiga ka dhisato meel ka baxsan dalkeeda, waxaana dhismaha Saldhigan oo si casri ah loo dhisya ku baxday malaayiin Dollar.
Saraakiil iyo Tababarayaal u dhashay dalka Turkiga ayaa saldhigan ku tababari doono ciidanka Soomaaliya, waxaana saldhigan la filayaa in lagu tababaro soona saaro sanadaha soo aadan kumanaan katirsan Ciidanka Soomaaliya.
Uber’s CEO will meet with UK transport authorities
China contributes win-win solutions against counter-globalization